Ifulethi elitofotofo eAlkapuri. Indawo ekhuselekileyo & ephucukileyo.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDhaval
Isanda kulungiswa indawo ephangaleleyo yeflethi embindini weyona ndawo ixakekileyo kunye neyona ndawo ixabisa kakhulu yentengiso yesixeko saseVadodara (Alkapuri). Iindawo zokuthenga kunye neendawo zokutyela zikumgama wokuhamba ukusuka eflethini. Nangona ibekwe kwindawo esembindini yindawo yokuhlala ezolileyo. Ikwayeyona ikhuselekileyo kwaye ikufutshane (kumgama weekhilomitha) ukusuka kuloliwe kunye nesikhululo sebhasi esiphakathi. Kufanelekile ukuhlala kwindawo yam e-Alkapuri Vadodara. Yiza ube lundwendwe lwam.
Le flethi ineholo lokuhlala, ikhitshi (enebalcony), iibhafu ezimbini namagumbi okulala amathathu.
IHolo yokuHlala enesango lepatio kunye nomnyango omkhulu unesofa, iisofa zokuphumla, ujingi, iPanasonic Air Conditioner kunye neTV enonxibelelwano lweTata Sky.
Ikhitshi linefriji entsha (L.G).
Kwigumbi lokuhlambela ezimbini, igumbi lokuhlambela elinye (indlu yangasese, isitya sokuhlambela kunye nebhafu) idityaniswe ne-Master bedroom. Enye yibhafu eqhelekileyo enendlu yangasese (isitya sokuhlambela esingaphandle kwendawo yokuhlambela) edibana nelinye igumbi lokulala.
Kumagumbi okulala amathathu, elokuqala ligumbi lokulala elikhulu elineebhedi ezimbini, ibhafu encanyathiselwe kunye nebalcony. Kwakhona i-panasonic A.C kunye nesibuko esikhulu esinekhabhathi.
Igumbi lokulala lesibini ligumbi elingeyo-A.C elinebalcony kunye nebhafu encanyathiselweyo. Nangona igumbi lokuhlambela kunye nesitya sokuhlambela zidibene nje negumbi lokungena. Kananjalo ineebhedi ezimbini ezingatshatanga, itafile yokunxiba enesipili kunye nekhabhathi.
Igumbi lesithathu elidibana nekhitshi kunye negumbi lokulala elikhulu liyafana nelesibini kodwa alinazo iibhedi. Ihlala itshixiwe ngaphandle kokuba kuyafuneka.
Yindawo entle ezolileyo ebekwe kwindawo ephambili yedolophu. Indawo ekhuselekileyo kakhulu yokuhlala kubahambi ababhinqileyo nabo.
Kukwakho nocango lwendawo yokuhlala phambi komnyango omkhulu ukuze umntu asoloko ejonga ukuba ngubani na ongena phambi kokuvula umnyango wegumbi lokwamkela.
Elona candelo lingcono kukumgama ohambahambayo ukusuka kwiindawo ezinkulu zokuthenga kunye neendawo zokutya.
4.87 · Izimvo eziyi-24
Kufana nokuba kwindawo enoxolo kwenye yezona ndawo zixakekileyo zorhwebo esixekweni.
Umbuki zindwendwe ngu- Dhaval
Ewe ndiyathanda ukudibana neendwendwe ukuba zikhululekile. Ndiyafumaneka ngefowuni.